Muhiimadda iyo faa iidooyinka ay leedahay isticmaalka masaxda wajiga | Ragga Stylish
Fasal yeesho | | Is-qurxinta, nololeedka
Way cadahay taas ragga waxaan daryeelaynaa sawirkeena aad iyo aad iyo inaan ka walaacsanahay muuqaalka iyo daryeelka maqaarkayaga. Ka sokow qoyaanka iyo dusha isha ee inteena badan isticmaasho, waxaa jira wax soo saar waxbadan naga caawin kara si aan u gaarno maqaar nadiif ah oo da 'yar oo leh dabacsanaan, kareemada bakhtiiya.
ka kareemada bakhtiiya waxay soo saaraan unugyada maqaarka ee dhintay, kuwaas oo ah dambiilayaasha muuqaal aan fiicnayn oo mararka qaarkood da 'ah. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in lagu daro "cibaadooyinka quruxda" oo laga faa'iideysto dhammaan faa'iidooyinka ay u leeyihiin maqaarkayaga.
1 Faa'iidooyinka isticmaalka xoqida
2 Goorma iyo sidee loo adeegsadaa?
Faa'iidooyinka isticmaalka xoqida
Caawinaad ka qaad wasakhda ku urura daloolada maqaarka maalintii oo dhan. Kareemka fuuq-baxa ayaa si qoto dheer u nadiifiya maqaarka, isaga oo ka tagaya wax wasakh ah oo ka dhalata wasakhda ama dhididka laftiisa.
Waxay xakamaysaa iskudarsanaanta sebumka iyo wasakhda maqaarka, baabi'inta madax-madoow ama dhibco madow.
Waxay dhiirrigelisaa xiirashada. Ka sokow nadiifinta maqaarka wasakhda, waxay soo saartaa unugyada dhintay ee xiirta mandiilka waxayna kor u qaaddaa timaha gadhka si ay si sahal ah uga xiirto
La maqaarku wuu soo noolaadaa 30 maalmood kasta, laakiin da 'ahaan, waa inaan siino riixitaan dheeri ah si aan ugu sii wadno howshan iyo kareemada la soo daayo waa xulafo aad u wanaagsan
Diyaarso maqaarka inaad kusii wado daaweyntaada quruxda badan oo aad u marsato huurka.
Goorma iyo sidee loo adeegsadaa?
Kadib markaad aragto waxtarka ay uleedahay maqaarkena, isticmaal a dib-u-dhiska, Ha waalin oo maalin kasta xoqin, maxaa yeelay waxaan heli karnaa saameyn lid ku ah waxa aan raadineyno.
Marka hore, maskaxda ku hay taas nooc kasta oo maqaar ah wuxuu u baahan yahay xoqid kala duwan, maadaama ay jiraan kuwo kuwa kale ka dagaal badan.
Waxa caadiga ah waa in la dalbadaa xoq 15-kii maalmoodba mar, laakiin waa runtaa haddii aad leedahay maqaarka saliida leh oo wasakhda wasakhda ee godadka ayaa ka weyn, waad sameyn kartaa usbuuciiba mar. Kareemka noocan ah waa inaan lagu xadgudbin maadaama maqaarku lumin karo dabacsanaantiisa oo xitaa ka dhigi karto mid qalalan sidii caadiga ahayd.
Si aad si sax ah u dalbato waxyaabaha jirka ka baxa, waa inaad marka hore ku dhaq wejigaaga biyo diirran. Ka dib mari kareemka dab-demiska ee wareegyada yaryar ee wajiga oo dhan adoo xoogga saaraya meelaha saliida leh ee wajiga, waxa loogu yeero aagga T (foodda, sanka iyo garka). Mar dambe, ku saar biyo diirran ka dibna mari qoyaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Is-qurxinta » Ahmiyada iyo faa iidooyinka ay leedahay isticmaalka wajiga xoqida
Soo noqoshada jaakada denim, guga aasaasiga ah